1 & 2 mpamokatra PCB sosona | China 1 & 2 Layer PCB Factory & mpamatsy
Tabilao boribory 2 ho an'ny hidy elektronika hendry
Ity dia takelaka boribory 2 sosona mihidy elektronika an-trano. UL voamarina ShengYi S1141 FR-4 tg130, hatevin'ny tabilao 1.0mm, hatevin'ny varahina 1 OZ (35um), famaranana volamena anaty rano, saron-tava solder maitso ary efijery landy fotsy. Satria takelaka kely io, ny PCB dia atolotry ny takelaka 20 * 3 = 60 PCS isaky ny tontonana. Ny mombamomba ny drafitra dia mampiasa lavaka hajia sy famaritana CNC. Ny famokarana rehetra dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny RoHS.
Tabilao boribory 2 sosona HASL Lead Free finish
Ity dia takelaka boribory 2 sosona ho an'ny vokatra azo havaozina. UL voamarina ShengYi S1141 FR-4 tg130, hatevin'ny tabilao 1.6mm, hatevin'ny varahina 1 OZ (35um), famaranana maimaim-poana HASL, saron-tava solder maintso ary efijery landy fotsy. 3 PCS isaky ny tontonana miaraka amin'ny fikirakirana drafitra V-Cut. Ny famokarana rehetra dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny RoHS.
2 sosona boribory sosona borosy PCB antsasaky ny lavaka ho an'ny vokatra Sensor
Ity dia takelaka boribory 2 sosona misy lavaka antsasaky nopetahany vokatra ho an'ny sensor. UL voamarina Shengyi S1141, FR-4 tg130, hatevin'ny 1.6mm, hatevin'ny varahina 1.5 OZ (50um), saron-tava solder maintso ary efijery landy fotsy. Misy kaody QR amin'ny PCB hamantarana. Ny famokarana rehetra dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny RoHS.
1 & 2 sosona PCB \_ RoHS mifanaraka 2 layer FR4 PCB
Ity dia takelaka boribory 2 sosona miaraka amina famaranana volamena. Ny fenitra dia mahazatra, FR4 tg130, hatevin'ny 1.6mm, hatevin'ny varahina 1 OZ (35um), saron-tava solder maintso ary efijery landy fotsy. Satria takelaka kely io, ny PCB dia atolotry ny takelaka 20 * 3 = 60 PCS isaky ny tontonana. Ny mombamomba ny drafitra dia mampiasa lavaka hajia sy famaritana CNC. Ny famokarana rehetra dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny RoHS.